Crispy Aromatic Duck | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
8 comments on “Crispy Aromatic Duck”
22/11/2012 @ 2:23 am
မ ရေ .. သရေ ယိုသွားတယ်နော် ..
23/11/2012 @ 5:16 am
ဟင်းအဆန်းလေးတွေပို့ ပေးလို့ ကျေးဇူးနော်။
24/11/2012 @ 3:22 pm
အမရေ အပေါ်မီးကိုဘယ်လိုပေးရမလဲဟင် ၊ အပေါ်မီးအောက်မီးကိုတပြိုင်ထဲပေးလို့ရလားဟင် oven မီးကိုမသုံးတက်သေးလို့ပါနော် cooking wine နဲ့ဗွီနီကာကို ဘယ်လိုအမျိုးအစားဝယ်လျှင် ကောင်းမလဲမသိဘူးဖြစ်နေတယ် အမျိုးအစားတွေကများနေလို့ပါ အမ
25/11/2012 @ 10:46 am
ညီမလေး အပေါ်မီး အောက်မီးဆိုတာoven ခလုတ်လေးတွေမှာပြထားတယ်။ ovenတခုလုံးအညီအမျှပူစေတာကို ပြောတာ၊ အကျက်ညီတာပေါ့။ ဗီနီဂါက အဖြူရောင် ဘယ်တံဆိပ်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ ဟင်းချက်တဲ့ cooking wine မရှိရင် ရိုးရိုး wine ကိုသုံးနော် cooking wine ကတရုတ်ဆိုင်မှာဝယ်လို့ရတယ်လေ ဘယ်တံဆိပ်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။ 🙂 no pressure get easy cooking naw
29/11/2012 @ 7:00 am
a ma what is the dark gravy on chinese pan cake? is it dark soy sauce? Where can I buy chinese pan cake ma.. could you please add the photo of pan cake package when you can? This is my favourite, i will definitely try this one, thank you so much par ma yay..
29/11/2012 @ 6:33 pm
this is just hoi sin sauce , u can buy it from chinese shop 🙂 i am in bbc food show at birmingham for5days . will be bc in town soon i will post the pic of package 🙂
17/02/2013 @ 6:07 am
မမ chinese pan cake ဆိုတာက ကော်ပြန့်မုန့်ဖတ်ကိုပြောတာလား…တခြားဟာလား
17/02/2013 @ 12:37 pm
rice paper nyi ma lay 🙂